Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra - Ozinina vokatra any Sina
Simban'ny tontolo iainana...
Roa ambin'ny folo ounse Pap...
Takela-taratasy fanary ny antoko
Boaty sakafo antoandro miloko miloko azo ampiasaina
Ny boaty sakafo antoandro amin'ny taratasy, dia manondro ny famokarana fitaovana vita amin'ny boaty antoandro ho an'ny boaty antoandro, amin'ny ankapobeny ny boaty antoandro vita amin'ny taratasy fanary, mety hampiasaina, mora ampiasaina amin'ny indostrian'ny sakafo. Satria vita amin'ny akora vita amin'ny taratasy izy io, dia azo amboarina sy amboarina amin'ny alàlan'ny fandevenana na fandoroana, tsy miteraka fandotoana ny tontolo iainana, ary manana sanda avo lenta amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
250*330*400 napkins miloko azo ampiasaina
Color napkin dia ny sublimation ny napkin fotsy, ka ny fampiasana ny lamba famaohana taratasy ho miloko loko izao tontolo izao. Tena malaza any amin'ny firenena samihafa izy io, ampiasaina amin'ny fety, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fety, fivoriam-pianakaviana ary toerana hafa, indrindra indrindra mba hifanaraka sy hanatsara ny sehatra, ary avy eo dia mamorona atmosfera mafana, tantaram-pitiavana ary feno fitiavana.
Kaopy taratasy fanariana roa ambin'ny folo ounse
Ny kaopy taratasy dia karazana fitoeran-taratasy vita amin'ny fanodinana mekanika sy famatorana amin'ny taratasy fototra (taratasy fotsy). Ny endrika dia miendrika kaopy vava. Kaopy taratasy natao savoka ho an'ny sakafo mangatsiaka mba hitehirizana gilasy, jam, dibera, sns.
Boaty sakafo antoandro amin'ny taratasy maromaro
Nafarana Kraft Paper, Kraft taratasy dia vita amin'ny sulphate coniferous hazo pulp, toy ny akora, amin'ny mafy sy mafy texture.Paper sakafo antoandro boaty, miaraka amin'ny tsena sy ny filan'ny olona, ​​fanary taratasy sakafo antoandro boaty bebe kokoa ny olona mila mampiasa. Indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny valan'aretina izao dia tsy ampy ny boaty sakafo vita amin'ny taratasy fanariana.
kaopy taratasy fito/sivy ounse
Haben'ny vokatra, 7/8/9/10/12/16/20 oz., sns. Ny tsena dia mampiasa vokatra 7/9 ounces. Ny vokatray dia manomboka amin'ny taratasy 200g hatramin'ny 350g. Sarimihetsika tokana sy lafiny roa - teknolojia sarimihetsika.
Napkins miloko maromaro
Napkin, napkin miloko dia vita amin'ny taratasy 18g sosona 3 na taratasy 18g sosona 2. Mazava ho azy fa misy orinasa ratsy sasany mampiasa taratasy 15-16 grama. Andeha hojerentsika ny vokatra.
Lovia taratasy fanary Halloween
Ny takelaka taratasy ho an'ny Halloween no vokatra lohahevitra matetika ampiasainay. Matetika ny mpanjifantsika dia manomboka mamolavola ny endriky ny fialantsasatra amin'ny fiandohan'ny taona.
Takela-taratasy mora simba amin'ny tontolo iainana
Mbola mampiasa fitaovana vera na seramika ve ianao rehefa manao fety? Tsia, tena tsy mampiasa ireny vokatra lafo sy mora simba ireny intsony ianao.
Lovia taratasy fanary manokana
Orinasa avy any Shina izahay: afaka manamboatra karazana takelaka taratasy rehetra izahay. Rehefa mila vokatra ianao, miaraka amin'ny hevitra sy ny endrika, dia afaka manomboka ny tantarantsika.
Ambongadiny fanary fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana fianakaviana supermarket lovia taratasy. Ny vokatra dia tonga amin'ny endrika sy habe isan-karazany: 7/8/9/10/12 santimetatra, boribory, efamira, bikan'ny biby, sns. Afaka manamboatra izay ilainao izahay. Mampiasa akora vita amin'ny taratasy sakafo kalitao avo lenta izahay, eo anelanelan'ny 200g sy 500g, afaka manonta lamina sy loko tianao. Fomba famokarana vokatra
Ambongadiny fanary fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana fianakaviana supermarket lovia taratasy. Ny vokatra dia tonga amin'ny endrika sy habe isan-karazany: 7/8/9/10/12 santimetatra, boribory, efamira, bikan'ny biby, sns. Afaka manamboatra izay ilainao izahay.
Ao an-trano, toeram-pivarotana lehibe, trano fisakafoanana, fety ary hetsika hafa, mbola mampiasa vokatra plastika tsy manimba ny tontolo iainana ve ianao? Tsia mihitsy. Tsia mazava ho azy. Ny vokatra vita amin'ny taratasy fanariana Ningbo Changliang. Na izany aza, izahay no orinasa ilainao. Matihanina izahay. Ny takelaka taratasy dia afaka mamokatra 7/8/9/10/11/12 santimetatra amin'ny vokatra misy endrika, ny fitaovantsika avy amin'ny 200g - 560g, taratasy vita amin'ny sakafo, sariaka ny tontolo iainana, manimba.